The Voice Journal – Page2– The Voice Weekly Myanmar
ခေါင်းပေါင်းစ နီနီ၊ နတ်ဝတ်နတ်စား ဝတ်ဆင်ထားသည့် သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသားမှာ နတ်ဒိုးသံနှင့်အတူ ကိုယ်ခန္ဓာယိမ်းထိုးလာသည်။ ၎င်းရှေ့ တွင် ကျားသတ္တဝါဟန်ပန်အတိုင်း လေးဖက်ထောက်နေသည့် အမျိုးသားနှစ်ဦး ရှိနေသည်။ ၎င်းတို့ရှေ့တွင်မူ အရှည်သုံးပေခန့်နှင့် လုံးပတ်သုံးလက်မခန့်ရှိသည့် ဝါးကို လေးစိတ်ခွဲကာ တစ်ပေပတ်လည် ဝါးစင်ကလေးကို...
Articles / lotaya / Politics
နိုင်ငံတကာသို့ရောက်ရှိသွားမည့် ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များကို ယခုအခါ နိုင်ငံတိုင်းက ဤထုတ်ကုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်ဟု သိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာပြည်ထုတ်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ရေး ပြောနေကြသော်လည်း ထိုကုန်ပစ္စည်းများအတွက် လိုအပ်သည့် ဘားကုတ် (Barcode) အကြောင်း ပြောသူ နည်းပါးလှသည်။...
မြန်မာ့စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားကို ထပ်လောင်းအားဖြည့်မည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တို့ကား တစ်စထက်တစ်စ အားယူရုန်းထလာပြီဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုနှေးကွေးသော ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် အစိုးရက ပြင်ဆင်လာပြီး တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းလည်း ပိုမိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာမည့်အခြေအနေရှိနေသည်။ ထို့အတူ...
တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၈ နာရီတွင် The Voice Journal Facebook page https://www.facebook.com/LivingColorMediaCoLtd/ တွင် ထုတ်လွှင့်နေသည့် စကားဝိုင်း၏ ကောက်နုတ်ချက်များကို ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွင် ပုံမှန်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၂.၁.၂၀၂၀ က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် စာရေးဆရာ...
တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိသော ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာသည် စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းမျှော်ရသော အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲကို အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင်ရော၊ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင်ပါ ဆက်တိုက်လုပ်သည်။ ထိုနှစ်ပွဲလုံးတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ဦးဆောင်နေသူများနှင့် အစိုးရ၏ စီးပွားရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူအရာရှိကြီးများ Panelist အဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့်...
မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွင် ရရန်ရှိသည့် ကြွေးမြီပေါင်းမှာ ကျပ်သန်းပေါင်းနှစ်သောင်းခွဲဝန်းကျင်( ၂၅ ဘီလီယံခန့်) ရှိနေသည်။ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အစီရင်ခံစာအရ တွေ့ရှိရသည့် ကြွေးမြီများဖြစ်သည်။ ထိုကြွေးမြီများသည် မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဖြစ်ခဲ့သည်တော့မဟုတ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရှိခဲ့သည့် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီး၏ ကြွေးမြီများ...
သမီး ‘ရှီ’ နှင့် တရုတ်အမျိုးသားရေးဝါဒီ ပြည်တော်ပြန်များ
ယမန်နှစ်မေလ နေသာသည့် ရက်တစ်ရက်တွင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုတန်းမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးမှာ ဒီပလိုမာဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး တိတ်တဆိတ် ကျောင်းသို့ ရောက်လာသကဲ့သို့ ကျောင်းမှ တိတ်တဆိတ်ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ ထို ‘သူမ’ ဆိုသည့် မိန်းကလေးမှာ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နှင့် သူ၏ဇနီး နာမည်ကျော်အဆိုတော်...
ခြေစွမ်းမပြလှသည့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ကစားသမားအသစ်များဖြင့် အစားထိုးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အားမလိုအားမရသံများမှာ ကျယ်လောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ၂၀၂၀...
“ကျွန်တော်ထင်တာက ပြန်လာတဲ့သူကနည်းမှာပါ။ ဘာလို့ဆို ဘာမှမရေရာ မသေချာဘဲနဲ့ ဟိုဘက်မှာ အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ ဘယ်သူက လာမှာလဲ”
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအင်စတီကျူ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဆလိုင်းငွန်ကျုံးလျန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မြန်မာအစိုးရက ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား တတ်သိပညာရှင်များကို ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် ကြေညာသည်။ ထိုကြေညာချက်သည် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တတ်သိပညာရှင်များကို...
Page2of 443«12345...102030...»Last »